Qarax Miino oo sababay dhimashada Xildhibaan iyo Wasiir ka tirsan Maamulka koofur Galbeed. - Latest News Updates
Qarax Miino oo sababay dhimashada Xildhibaan iyo Wasiir ka tirsan Maamulka koofur Galbeed.
Waxaa dhawaan ku geeriyooday Qarax Miino Alle ha u naxariistee duleedka degmada afgooye ee gobalka Sh/Hoose Xildhibaan ka tirsan Baarlaamanka Maamulka Hirshabeelle iyo Wasiiru Dowlihii amaanka ee Maamulka koofur Galbeed.
Madaxdaan iyo Askar la socotay ayaa Gaari ay saarnaayeen waxaa haleelay Qarax miino oo dhulka lagu aasay,kaas oo ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Waraabaale iyo Doonka oo duleedka degmada Afgooye.
Waxaa mas’uuliyiintaan Geeriyootay lagu kala magacaabaa Cabduqaadir C/raxmaan Baraf oo ahaa Wasiiru Dowlihii ammaanka Koofur Galbeed iyo Xildhibaan Axmed Cabdi Faarax oo ka tirsanaa Baarlamaanka Hirshabeele iyo sidoo kale ilaaladii la socotay Madaxdaasi.
Dhanka kale Madaxdaan ayaa ka yimid degmada Wanla-wayn oo ay kaga qayb galayn shir looga hadlayay arrimo la xariira ammaanka degmadaasi, sidoo kale wararka ayaa sheegaya in mas’uuliyiinta dhintay qaraabo ahaayeen.